बोतल कप च्यालेन्ज पूरा गरेपछि आलोचित भए सलमान, युजरले भने– यी कस्ता मुसलमान हुन् ?
२०७६ असार ३० सोमबार, एक प्रयोगकर्ताले सलमान खान मुसलमान भए पनि क्रिस्चियनको प्रक्रिया पूरा गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । अर्को एक जनाले यिनी कस्ता मुस्लिम हुन् ? भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
रणवीरले तस्वीर खिचाएको युवतीको खोजी शुरु
२०७६ असार २९ आइतबार, साथै उनले केही फिल्म पनि खेलिसकेकी छिन् । उनी सन् २०११ मा रिलिज भएको 'हम तुम शबाना' मा देखिएकी थिइन् । उनी रियालिटी शो खतरोंका खेलाडीमा पनि आइसकेकी छिन् । ... बाँकी अंश»
माल्यालाई बोस भन्दा रिसाए दर्शक, भुलेर पनि पैसा सापटी नदिन गेललाई सुझाव
२०७६ असार २९ आइतबार, किङफिसरका मालिक रहेका माल्या क्रिकेटमा पुग्दा भारतीयहरुले नारा लगाएका थिए । स्टेडियम पुगेका उनलाई भारतीय दर्शकले 'माल्या मेरा पैसा दे', 'चोर हे चोर हे गली गली मे शोर है बिजय माल्या चोर है...' भन्दै बिरोध गरेका थिए। उनी खेल सकिएपछि फर्कने क्रममा पनि नारा लगाइएको थियो । ... बाँकी अंश»
बिजय माल्यासँगको फोटो शेयर गरेपछि फसे क्रिस गेल
२०७६ असार २९ आइतबार, यसैबीच एक प्रयोगकर्ताले माल्यासँग आफ्नो बैंक अकाउण्ट शेयर नगर्न आग्रह गरेका छन् । साथै ऋण दिने गल्ती भुलेर नगर्न भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । माल्याले पनि आफ्ना साथीसँग भेटेर निकै खुसी लागेको बताएका थिए । आफूले विगत एक वर्षदेखि आफ्नो पैसा जबर्जस्ती पैसा लगिरहेको बताएका छन् । यस्तोमा आफूलाई चोर भन्नेहरु नै वास्तवमा चोर रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
चिसो हातले चार्जमा राखेको मोबाइल छुँदा बालकको मृत्यु
२०७६ असार २६ बिहिबार, झापा । झापाको गौरादह नगरपालिका–८ दामाबारीमा मोबाइल चार्ज गर्दा करेन्ट लागेर ६ वर्षीय बालकको बिहिबार मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार २४ मंगलबार, सन् २०१८ मा कार्यरत अपाङ्गता तथा विभिन्न रोगले ग्रस्त व्यक्तिमध्ये ६६.३ प्रतिशतले कामका शिलशिलामा आफूहरूलाई समस्या पर्ने गरेको बताएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूले काम र उपचारको सञ्तुलन मिलाउन निकै कठिन पर्ने गरेको सर्वेक्षणकर्ताहरुले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
जलवायु परिवर्तनका कारण अमेरिकाका माछा संकटमा
२०७६ असार २४ मंगलबार, सान फ्रान्सिस्को । जलवायु परिवर्तका कारण विश्वको तापक्रममा वृद्धि हुने क्रमसँगै अमेरिकी एक राज्य विन्कन्सनमा प्राकृतिक रूपमा खोला, नदी तथा तलाउमा पाइने माछाको भविष्यमा आगामी केही दशकभित्र नै व्यापक चुनौति आएको सोमबार सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ... बाँकी अंश»
ट्रम्प 'ओभर स्मार्ट' हुदा बिग्रियो भाषण
२०७६ असार २२ आइतबार, काठमाडौं । अमेरिकाको स्वतन्त्रताको दिवसमा ट्रम्पले गरेको एक भाषणमा धेरै गलत तथ्य बोलेका छन् । लिखित भाषण पढ्ने क्रममा गल्ती बोलिने घटना निकै कम हुने गरेको छ । ... बाँकी अंश»
१३ सय वर्षदेखि समुद्रमा तैरिने गाउँ बनाएर बसेका छन् ७ हजार मानिस
२०७६ असार २० शुक्रबार, काठमाडौं । सामान्य रुपमा मानिस जमिनमा नै आफ्नो घर बनाएर बस्छन् । तर, संसारमा यस्तो पनि प्रजाति छ, जसले १३ सय वर्षदेखि जमिनमा पाइला राखेको छैन । ... बाँकी अंश»
सबैभन्दा महँगो सम्बन्ध विच्छेद : पाएको पैसामा आधाभन्दा बढी दान गर्दै मेकेन्जी
२०७६ असार १८ बुधबार, काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस र उनकी पत्नी मेकेन्जी बेजोसबीच सम्बन्धविच्छेद हुने भएको छ । २६ वर्षअघि यी दुवैको बीचमा विवाह भएको थियो । ... बाँकी अंश»
माईक टाईसन गाँजा रेसोर्ट खोल्दै
२०७६ असार १७ मंगलबार, एजेन्सी। पुर्व विश्व हेविवेट बक्सिङ च्याम्पियन माईक टाईसनले गाँजामा लगानी गरेका छन्। उनले ३ हजार ३ सय २५ रोपनीमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा गाँजा रेसोर्ट खोल्ने भएका छन्। ... बाँकी अंश»
'राम साइला' मा पत्रकार सुजाता
२०७६ असार १७ मंगलबार, काठमाडौं । नेपाली संगीत आकाशमा पत्रकार सुजाता खत्री 'राम साइला' बोलको गीतबाट डेब्यू गरेकी छिन्। ... बाँकी अंश»
फेसबुकका अर्बपति मालिक किन चढ्छन् साधारण कार ?
२०७६ असार १५ आइतबार, काठमाडौं । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गको विषयमा धेरै बताउनै पर्दैन । आइतवार विश्व सामाजिक सञ्जाल दिवस विश्वभर मनाइँदै छ । ... बाँकी अंश»
युवराज सिंहको सन्यास पार्टीमा पूर्व प्रेमिकामाथि नजर
२०७६ असार १५ आइतबार, उक्त पार्टीमा युवराजकी पत्नी हेजल कीच पनि सहभागी थिइन् । युवराज सिंह पनि कालो ज्याकेछ र टीसर्टका साथ सेतो पाइन्टमा उक्त पार्टीमा देखिएका थिए । ... बाँकी अंश»
३ अर्ब २० करोड खर्च गरेर विवाह गरेका उद्योगपतिले गरे ९० हजारको सफाइ
२०७६ असार १३ शुक्रबार, काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकाका उद्योगपति अजय गुप्ताका छोरा सूर्यकान्तको विवाह भारतको उत्तराखण्डको औलीमा भएको थियो । विलासी व्यवस्थापनमा ३ अर्ब २० करोडभन्दा बढीमा उक्त विवाह सम्पन्न भएको थियो । विवाहपछि आयोजन स्थलम जम्मा भएको अत्यधिक फोहोरको विषयमा विवाद भएको थियो । ... बाँकी अंश»
फेरि जोडिएलान् मलाइका र अरबाज खान ?
२०७६ असार १३ शुक्रबार, काठमाडौं । मलाइका एरोरा र अरबाज खान छुट्टिएसँगै कुनै न कुनै समाचारको कारण चर्चामा रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय मलाइका र अर्जुन कपूरको सम्बन्धको विषयमा विभिन्न किसिमको समाचार आइरहेका छन् । ... बाँकी अंश»
श्रीमानले २७ वर्षसम्म श्रीमतीलाई घरको काम गराएको भन्दै अदालतले लगायो २ करोड बढीको जरिवाना
२०७६ असार १२ बिहिबार, काठमाडौं । अर्जेन्टिनाको एक अदालतले श्रीमतीलाई २७ वर्षसम्म घरेलु काम गएको भन्दै एक व्यक्तिलाई २ करोडभन्दा बढी बुझाउन आदेश दिएको छ । ... बाँकी अंश»
भारतको रेलभित्रै लुटिए तीन सांसद
२०७६ असार ११ बुधबार, मुम्बई (भारत) । मनसुन सत्रमा भाग लिन रेलबाट मुम्बई आइरहेका सांसद् लुटिएका छन् । महत्वपूर्ण कुरा तीनैजना सांसद् रेलको विशेष एसी डिब्बामा थिए । ... बाँकी अंश»
सांसद सनीका बुवा धर्मेन्द्र यसरी विताउदै छन् जीवन
२०७६ असार ९ सोमबार, धर्मेन्द्रले फार्ममा टमाटर र बैगुन पनि लगाएका छन् । धर्मेन्द्रले खेती गर्न मनपर्ने बताउदै भने , ‘खेती गर्नुको मज्जा साथै मिलेर काम गर्नुमा छ । यसमा काम गर्न र गराउने दुवैलाई आनन्द मिल्छ । उनले भनेका छन्, ‘सृष्टिको काखमा उनको देन यस्तै कृपा रहिरहोस र सबैको माया मिलोस । म यसैमा खुशी छु ।’ ... बाँकी अंश»
मरेपछि औषधी, १४ बर्ष जेलमा विताएर मृत्यु भएको पाँच बर्षपछि निर्दोष सावित
२०७६ असार ८ आइतबार, काठमाडौं । देशद्रोहको मामिलामा १४ वर्षदेखि जन्मकैदको सजाय काटिरहेका तीन व्यक्तिलाई भारतको अदालतले निर्दोष साबित गरेको छ । यसमध्ये एकजनाको पाँच वर्षअघि नै ज्यान गइसकेको छ । ... बाँकी अंश»